स्वावलम्बन लघुवित्तको १.९ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज (जेठ २६ गते) बाट १ लाख ९० हजार बढी कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले कुल १ लाख ९० हजार ६५२ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुले खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामीमा...
काठमाण्डौ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आज (जेठ २४ गते) बाट १ लाख ९० हजार बढी कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ। संस्थाले कुल १ लाख ९० हजार ६५० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाहरुले खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। लिलामीमा...
आजबाट मेरोमाइक्रोफाइनान्सको ६० हजार बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । मेरोमाइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ६० हजार बढी कित्ता संस्थापक सेयर आज (जेठ १७ गते) बाट लिलामीमा राखिएको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको मेरोमाइक्रोफाइनान्सको ६० हजार ४१८ कित्ता सेयर लिलामीमा राखिएको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक वा जोकोही व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाले बोलपत्र पेस...
सीआईटीको ३.५ लाख बढी कित्ता सेयर लिलामीमा, न्यूनतम मूल्य कति ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) को ३ लाख ५० हजार कित्ता बढी संस्थाक सेयर आज आइतबारबाट लिलामीमा राखिएको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सीआईटीको ३ लाख ५० हजार ३६९ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा सेयरमा प्रचलित कानुनबमोजिम योग्य जोसुकै लगानीकर्ताहरुले पनि खरिद आवेदन दिन सक्नेछन्। लिलामीमा...
काठमाण्डौ । एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको साढे १ लाख कित्ता बढी संस्था सेयर आउँदो वैशाख २६ गतेबाट लिलामीमा राखिने भएको छ। एसियन लाइफमा रहेको महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेडको संस्थापक समूहको १ लाख ६६ हजार ७५७ कित्ता सेयर लिलामीमार्फत बेच्न लागिएको हो। लिलामी सेयरमा विद्यमान सेयरधनीका साथै जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र...
मेरो माइक्रोफाइनान्सको ६२ हजार बढी कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर आज आइतबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले मेरो माइक्रोफाइनान्समा रहेको ६२ हजार ३८८ कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। यो लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापक, जोकोही व्यक्ति, कम्पनी र संघसंस्थाले...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले १.२५ लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमा राख्ने
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले ३ कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ। बैंकले आरएमडीसी लघुवित्त, ग्रामीण विकास लघुवित्त र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा रहेको कुल १ लाख २५ हजार ६०९ कित्ता संस्थापक सेयर यही वैशाख १६ गतेबाट लिलामीमार्फत बेच्ने भएको हो। लिलामीमा राखिने सेयरमा...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको १ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको संस्थापक समूहका एक सेयरधनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको १ लाख कित्ता लिलामीमा राखेका छन्। चैत २३ गतेबाट लिलामीमा राखिएको सेयरमा आउँदो वैशाख २६ गतेसम्म गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ। लिलामी सेयरमा विद्यमान संस्थापकहरु तथा अन्य जोकोही व्यक्ति, कम्पनी वा संघसंस्थाहरुले...
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको ८१.५ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडले फर्स्ट माइक्रोफाइनान्समा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर आज सोमबारदेखि लिलामीमा राखेको छ। बैंकले फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सकोे ८१ हजार ५०० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएको सेयरको न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ तोकिएको छ। लगानीकर्ताले बोलपत्र...